Ajụjụ - Cannapresso Health Inc
CBD nwere ike ewepụtara hemp na wii wii. All anyị CBD na-ewepụtara eke, osisi dabeere hemp, nke bụ iwu na niile 50 na-ekwu. CBD ewepụtara hemp bụ ọgaranya ọgwụ na ọgwụgwọ uru, na ndammana ala na THC.
Gịnị bụ CBD ụkpụrụ?
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti hemp na wii wii?
1. Plant Iche
Ọ bụ ezie na ma osisi bụ akụkụ nke otu ụdị, hemp na wii wii nwere ụfọdụ ịrịba iche.
1) a.Hemp ọkọride 15 ụkwụ ogologo na nwere ogologo oke stalks, ọ na-comfortably anya juru n'ọnụ ọnụ.
2) a. Wii wii adịkarịghị karịa 5 ụkwụ elu na-etolite outwards na ihe epupụta na buds, onye ọ bụla osisi mkpa ohere na-eto eto.
Na ma wii wii na hemp, abụọ na ụdị cannabinoids kwụpụta: Tetrahydrocannabinol (THC) & Cannabidiol (CBD)
1) Hemp nwere sonso ọ bụla THC na niile, na nkezi ọdịnaya n'etiti 0.05-1%. Hemp nwere ihe CBD karịa nkezi afọ osisi.
2) Okooko osisi nke na nkezi wii wii osisi nwere THC etoju nke 10-14%.
2) wii wii mmanụ nwere 50-60% THC, 10-15% CBD.
4. eji nke ọ bụla mmanụ
1) hemp, na elu CBD, ala THC ọdịnaya, na-eji maka atụrụ ndụ, moisturizing, obi, calming.
2) wii wii, na elu THC, ala CBD ọdịnaya, na-eji maka ntụrụndụ na-emetụta uche.
CBD, mkpụmkpụ maka cannabidiol, bụ a na-abụghị ndị na-emetụta uche chemical ogige ke Ou, maka ọtụtụ cannabises nke ọgwụ na ahụ ike uru. N'aka nke ọzọ, THC, mkpụmkpụ maka tetrahydrocannabinol, na-emetụta uche compound na wii wii, na-eme ka "nnukwu", jikọtara afọ mkpa, ha abụọ iche kpam kpam cannabinoids, nke bụ a na klas nke chemical ogige.
THC na-eleghị anya kasị mma mara maka ịbụ ndị na-emetụta uche mgwa wii wii. CBD Otú ọ dị, ndị na-abụghị na-emetụta uche. Ndị ọzọ okwu, CBD nwere ike ghara inwe ị dị elu. Mgbe ihe na-akụda ka ntụrụndụ ọrụ, nke a pụrụ iche mma nke CBD bụ ihe na-eme ya otú na-adọrọ adọrọ dị ka a na nkà mmụta ọgwụ.
Dọkịta na-emekarị na-ahọrọ ọgwụgwọ na di ntakiri mmetụta, nke siworo a isi ihe mgbochi na nnabata nke ọgwụ wii wii. N'otu aka ahụ, CBD e ji na-emeso ụmụaka na dị iche iche ọrịa.
THC maara na ime ka ụfọdụ ndị mmadụ na-echegbu onwe ma ọ bụ paranoid. Ma CBD na-kwenyere na ha nwere na-abụghị mmetụta. N'eziokwu, ọmụmụ na-egosi na CBD arụ ọrụ ịgbagha nchegbu kpatara ingesting THC. A ọnụ ọgụgụ nke ọmụmụ na-atụ aro na CBD ike belata nchegbu mgbe ndinọ na ya.
Tụkwasị n'ịbụ ndị na-abụghị na-emetụta uche, CBD yiri ka nwere antipsychotic Njirimara. Nchọpụta kweere na CBD nwere ike oru ngo wii wii ọrụ si na-elu site na mbenata na psychosis-dị ka mmetụta nke THC. Otú ọ dị, inye iwu uche-agbanwe ọrụ nke THC abụghị niile na CBD dị mma maka. N'onwe ya, CBD a na-anwale dị ka ihe antipsychotic na nkà mmụta ọgwụ ndị mmadụ na isi mgbaka.
Otu n'ime ihe ndị kasị ojiji nke wii wii bụ dị ka a na-ehi ụra enyemaka. THC na-kweere na-ahụ maka ọtụtụ nke wii wii ụra-inducing mmetụta. N'aka nke ọzọ, ọmụmụ na-atụ aro CBD eme iji na-akwalite wakefulness, na-eme CBD a ogbenye oke dị ka a na-ehi ụra na nkà mmụta ọgwụ. Ndị na-abụghị mmetụta nke CBD na THC na-ehi ụra pụrụ ịkọwa ihe mere ụfọdụ nje afọ akpata ọrụ na-eche na-ero ụra mgbe ndị ọzọ na-mara mbo mbuli ike.
Ezie na ọtụtụ mba nwere ike iwu gburugburu wii wii na THC, iwu ọnọdụ nke CBD bụ obere doro anya. Na United States, CBD bụ nyochawa illegal ebe ọ na-nkewa dị ka a Ịtọ oge m ọgwụ n'okpuru gọọmenti etiti iwu. A na-emepụta ọgwụ ụdị CBD, a na-akpọ Epidiolex, naanị na nso nso sụrụ site FDA na-anwale ụmụaka oké Akwụkwụ na-adọ.
N'aka nke ọzọ, CBD a hụrụ na hemp, nke nwere ike n'ụzọ iwu kwadoro dị na-ere US ụlọ ọrụ ụfọdụ emeela uru nke a loophole site importing elu-CBD hemp extracts si mba ọzọ ebe hemp na-emepụta.
Ọ bụ n'ebe ahụ ọ bụla dị iche n'etiti hemp CBD na wii wii CBD?
"CBD bụ CBD-Ọ dịghị mkpa ebe o si abịa."
Ee, ọ dị ihe o mere. Ifuru-n'elu na epupụta nke ụfọdụ ulo oru hemp pụta nwere ike a viable isi iyi nke CBD (iwu mbipụta n'agbanyeghị), ma hemp bụ ọlị ihe ezigbo isi iyi nke cannabidiol. Industrial hemp a nwere nnọọ nta cannabidiol karịa CBD-ọgaranya afọ. Nnukwu ichekwa ulo oru hemp na-chọrọ wepụ a obere ego nke CBD, si otú na-azụ ihe ize ndụ nke na-egbu egbu contaminants n'ihi hemp bụ a "bio-accumulator" na-adọta arọ ọla si ala. Single-molekul CBD synthesized na a lab ma ọ bụ amịpụtara ma nụchaa si ulo oru hemp kọrọ oké egwu ọgwụ terpenes na sekọndrị cannabinoids dị afọ pụta. A ogige emekọ CBD na THC ka mma ha ọgwụgwọ uru.
N'ihi na legality nke CBD (cannabidiol), The nnukwu ihe dị iche bụ THC larịị. Mgbe wii wii osisi nwere nnukwu etoju nke THC, hemp nwere ihe dị nnọọ nta nke na-emetụta uche chemical, nwere ihe karịrị 0.3% THC. Nke a otu dị iche bụ ihe kasị ịdabere na ịmata ihe dị iche hemp si wii wii.
Industrial Hemp ugbo Act of 2013 - kpezie na-achịkwa bekee ime ka ewepu ulo oru hemp si definition nke "wii wii." Akowara okwu "ulo oru hemp" pụtara osisi Ou sativa L. na bụla nke ndị dị otú ahụ osisi, ma na-eto eto ma ọ bụ, na a Delta na itoolu tetrahydrocannabinol ịta nke karịa 0.3 percent na a akọrọ ibu ndabere. Chere Ou sativa L. izute na ịta ịgba ma ọ bụrụ na a onye na-etolite ma ọ bụ n'ibu ya maka ebumnuche nke na-eme ka mmepụta hemp dị na steeti iwu.
DEA: "The ọgwụ ọhụrụ koodu (7350) guzosie ike [ọchịchị] adịghị agụnye ihe ma ọ bụ ngwaahịa na-ekwe n'aka definition nke wii wii weputara na-achịkwa bekee Act (CSA). The ọgwụ ọhụrụ koodu na-agụnye naanị ndị extracts na-ada n'ime CSA definition nke wii wii. Ọ bụrụ na a ngwaahịa ẹkewetde nanị nke akụkụ ụfọdụ nke afọ osisi ekwe n'aka CSA definition nke wii wii, dị ngwaahịa ga-esịne ke ọgwụ ọhụrụ koodu (7350) ma ọ bụ na ọgwụ ọjọọ na koodu n'ihi na wii wii (7360) "
Olee uru nke CBD?
CBD (cannabidiol) awade zuru ụdịdị dị iche iche nke ike uru dị na ọgwụ afọ ma na-enweghị mmetụta nke THC. Na-adakarị ntọala CBD e gosiri enyere emeso cancer, inyeaka ụfụ, mbufụt, nchegbu, ọgbụgbọ, nchegbu, ala ọbara mgbali, isi ọwụwa na ọtụtụ ndị ọzọ nsogbu ahụ ike nke. Ụfọdụ akụkọ na-egosi na elu kasịnụ nke CBD pụrụ n'ezie welie mmetụta nke THC. Ka anyị na-apụghị ime ka a na-ekwu dị ka mmetụta nke CBD, Cannabidiol mmanụ, ma ọ bụ hemp CBD mmanụ, anyị na-akwado na-akwado na-achọ onwe ha maka uru nke CBD.
M ga-enweta "elu" site CBD?
Gịnị bụ uru iji hemp?
Hemp nwere magburu onwe nutitional uru, na-enye dị oké mkpa ekwukwa n'akwụkwọ mmiri a na-akpọ mkpa ọdụdụ asịd na mmadụ adịghị amị ndammana, na a ga-gwusia site na nri. Ọzọkwa, ha abụrụ nnyocha sayensị na-akwado na oriri nke CBD si hemp mmanụ maka n'ozuzu ọdịmma ma na-eme ka ị nọgide ike, ma na-adịghị gị "elu". Ọ bụghị nanị na hemp mmeghari na-eto ngwa ngwa, ihe fọrọ nke nta ọ bụla akụkụ nke osisi bụ useable - maka nri, eriri, ụlọ ihe na mmanụ ụgbọala, na ihe e mere atụmatụ 25,000 ojiji. Hemp sequesters CO2 na-adịghị mkpa ogwu ndi na-eme nke ọma. Ọ na-doo ala mma ọnọdụ karịa tupu a kụrụ.
Mgbe-ezuru, ọ na-adịkarị na-ewe ihe 20-30 nkeji maka ya na-irè. Ọtụtụ ndị mmadụ mgbe mbụ malite si, na-amaghị ihe na-atụ anya na mgbe ileghara na ọ na-amalite na-enyere ha ọnọdụ. Ebe ọ bụ na ọ dịghị "elu" na-akọ, na ọtụtụ ndị na-amaghị na ọ na-eme ihe ọ bụla. Naanị mgbe a mgbe ha na-aghọta na ihe mgbu ọ na ha nwere ike ịbụ na ọ dịkwaghị e ma ọ bụ dị ka ọkụ n'ọnụ. The "mmetụta" bụ otú aghụghọ na-emekarị, ihe niile dị ike ike mata bụ a aghụghọ calming. Mgbe ọtụtụ nwaanyị, ọtụtụ ndị kọrọ na ha ugbu a na-achọpụta na ọ "na-ewere na onu" anya nkeji mgbe adọ. Ma, n'ihi na ọtụtụ newcomers, ha na-atụ anya a nnukwu mgbanwe na ya dị nnọọ na-amasị na, ma ọ bụrụ na a na-eji maka mgbu management. A nwayọọ ntọhapụ nke ndị mgbu bụ na-emekarị pụtara kwesiri ngosi mgbe na-ewere ndị a na ngwaahịa na kwesịrị ekwesị ichekwa.
Mgbe iji Vape Oil, olee otú m maara otú ihe CBD m na-?
Olee otú ọtụtụ ndị na-aga banyere ya bụ site na-enwe otu katrij raara nye ha Hemp Vape Oil. Ha wụnye katrij jidesie ha vape pen na-eji ya oge nile ụbọchị. Site maara ịta nke CBD na vape mmanụ ha na-eji, ha nwere ike gbakọọ ego ole CBD bụ na katrij mgbe ha ju ya. Ka ihe atụ, anyị vape mmanụ nwere 25mg nke CBD kwa 1.5ml nke vape mmanụ. 1.5ml bụ a nkịtị ego jupụta a katrij (ma ọ bụghị naanị ego ..... otú ịgbanwe dị ka katrij ị na-eji). Ya mere, mgbe na-eji anyị 100mg 10ml vape mmanụ, ma ọ bụrụ na onye chọrọ 20mg nke CBD, ha ga-vape a full 2ml katrij oge ọ bụla ha na-eji ya. Ma, ọzọ, dabere na otú ogologo na ikpuru na-enwe na ga-emetụta otú CBD n'ezie odụk a onye ahu.
Anyị 100mg 1oml karama: The Vape Oil nwere 10mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-1ml.
Anyị 300mg 1oml karama: The Vape Oil nwere 30mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-1 / 3ml.
Anyị 500mg 1oml karama: The Vape Oil nwere 50mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-0.2ml.
Anyị 1000mg 1oml karama: The Vape Oil nwere 100mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-0.1ml.
Anyị 100mg 15ml karama: The Vape Oil nwere 20 / 3mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-1.5ml.
Anyị 300mg 15ml karama: The Vape Oil nwere 20mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-0.5ml.
Anyị 500mg 15ml karama: The Vape Oil nwere 100 / 3mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-0.3ml.
Anyị 1000mg 15ml karama: The Vape Oil nwere 200 / 3mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-0.15ml.
Anyị 100mg 3oml karama: The Vape Oil nwere 10 / 3mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-3ml.
Anyị 300mg 3oml karama: The Vape Oil nwere 10mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-1ml.
Anyị 500mg 3oml karama: The Vape Oil nwere 50 / 3mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-0.6ml.
Anyị 1000mg 3oml karama: The Vape Oil nwere 100 / 3mg nke CBD kwa 1 ml nke vape mmanụ. Ya mere, ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ 10mg nke CBD, mgbe ahụ, ị ​​ga-0.3ml.
Gịnị bụ ntupu V +?
Obi sie, ngwaahịa anyị na-ere bụ iwu niile 50 States na ihe dị mba 40 n'ụwa nile. Ọ na-adịghị achọ ka ọ bụla ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ na ahụ ike na kaadị United States. Ọ bụrụ na ị bụ ná mba ọzọ, biko gị iwu obodo. Ọtụtụ na-ekwu amalitela n'Ụzọ Iwu Kwadoro CBD Oil si wii wii; na ụfọdụ na-ekwu tozuru oke ya ala. Mgbe CBD bụ CBD na ọ na-adịghị ihe o mere ma ọ na-abịa site na wii wii ma ọ bụ hemp maka ya na-adị irè, n'ihi na wii wii nwere iwu mkpa, CBD Oil si wii wii nwere ike ma ọ na-iwu na gị ala. Ma, CBD Oil si Hemp bụ iwu niile 50 na-ekwu, n'agbanyeghị nke gị ala iwu na wii wii na wii wii CBD Oil.
M ga-agabiga a Drug Test mgbe iji ndị a Products?
Anyị dere ihe dum isiokwu na anyị Blog Page banyere nke a. Biko pịa ndị na-esonụ aha ịhụ: ò CBD eme ka mmadụ ule AKỤZIRI ON A ọgwụ na ihuenyo?
Gịnị mere o ji dị oké ọnụ?